Google Analytics: Aza manoratra tsindry Subdomain ho bouncing | Martech Zone
Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia rindrambaiko ho toy ny mpanome tolotra ary samy manana tranokala sy tranokala fampiharana. Manoro hevitra anay izahay roa fa matetika no tazonina misaraka satria tadiavinao ny fahamoran'ny rafitra fitantanana votoaty ho an'ny tranonkalanao, fa tsy te-ho fehezin'ny fifehezana kinova, fiarovana ary olana hafa amin'ny fangatahanao. Na izany aza, mitondra fanamby izany raha ny amin'ny Google Analytics rehefa manana kaonty roa misaraka ianao - ny iray amin'ny bokikely (www.yourdomain.com) ary ny iray hafa amin'ny subdomain (app.yourdomain.com). Mety manana takelaka fanampiana amin'ny subdomain hafa aza ianao (support.yourdomain.com).
Matetika ny mpampiasa anao dia mitsidika ny pejy an-tranonao ary avy eo dia tsindrio ny fidirana fampiharana na rohy fanohanana… ity isaina ho toy ny fihenam-bidy ary miova ny anao Analytics. Ho an'ireo orinasa manana tobim-pahalalana be mpampiasa dia matetika io no afaka mitarika fihenam-bidy betsaka kokoa noho ny fitsidihana marina ny tranonkalany izay tian'izy ireo. Mazava ho azy fa ny fizarana kaonty Google Analytics iraisana sy ahafahan'ny subdomain anao dia afaka manala anao amin'ity olana ity. Na izany aza, orinasa maro no tsy maniry ny hampifangaro ilay Analytics eo anelanelan'ny tranokalan'ny brochure sy ny lozisialy ho toy ny sehatra serivisy.
Mety ho tsotra ny valiny - manaraha hetsika iray fotsiny eo amin'ireo rohy menio izay mitarika fifamoivoizana amin'ireo subdomain ireo. Ny fitsapana dia rehefa tonga any amin'ny tranonkalanao ny mpitsidika ary tsy mifandray aminy na amin'inona na amin'inona. Fifandraisana iray raha ny marina. Ka raha misy mpitsidika tonga eo amin'ny tranokalanao, dia tsindrio ny rohy iray izay miteraka hetsika iray, izy ireo tsy nibolisatra.
Event tracking mora ampiharina. Ao anatin'ireo lahatsoratra vatofantsika, manampy fotsiny ny hetsika tadiavinao ny fanarahana.
Raha ao amin'ny WordPress ianao dia misy plugin tsara ho an'ity - Tracking amin'ny menus GA Nav, izay mamela anao hametraka ny fizotran'ny hetsika ao amin'ny menioo na afaka manindry boaty ianao hahatonga azy io tsy hifaneraserana mihitsy.
Tags: Aza kivyfanaraha-maso ny hetsikaGoogle Analyticssubdomaintrackeventplugin WordPress
14 Jiona 2014 à 8:58
Lahatsoratra tsara hafa Doug !! Misaotra ny fizarana..
15 Jiona 2014 à 9:56